बजार अनुगमनमा तीव्रता देऊ | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ आश्विन २२, बिहीबार ०८:५३ गते
कोरोना महाव्याधिको कहरका बीच दसैँतिहार नजिकिँदै छ । बजारमा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री किनमेल गर्ने उपभोक्ताको चहलपहल बढ्न थालेको छ । तथापि, ज्याला मजदुरी गरी दैनिक छाक टार्नुपर्ने बाध्यता भएका बहुसंख्यक नागरिकका लागि जुनसुकै चाडबाड आए पनि बोझ बन्ने गरेको छ । बिहान–बेलुकीको छाक टार्ने चिन्ताले पीडित बनेका हुँदाखाने वर्गका लागि आकाशिँदो बजार भाउले थप आहत बनाउने गरेको छ । तर, नियमनकारी निकायको कमजोरीका कारण निमुखा जनता नै महँगी र बजार भाउको मारमा पर्ने गरेका छन् । चाडबाडको बहानामा अनावश्यक मूल्य वृद्धि, खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणमा बजार अनुगमनको अहम् भूमिका रहन्छ । अहिले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि त सामान्य विषय भएको छ । योभन्दा जटिल त अखाद्य पदार्थको बिक्रीवितरण हुने गरेको पाइएको छ । चाडपर्वको मौका छोपेर कालोबजारीले अखाद्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्ने समस्या पनि नेपाली बजारमा नौलो होइन । उपभोक्ता कतिसम्म सचेत छन् ? आफ्नो स्वास्थ्यप्रति कति संवेदनशील रहेका छन् ? आफूले खरिद गर्ने सामग्रीको गुणस्तरमा कति ध्यान दिन्छन् ? यस्ता सवालको खोजी गर्न सकिए कसैले पनि सजिलै ठगी गर्न सक्दैन ।
चितवनमा सरोकारवाला निकायले बेलाबेलामा बजार अनुगमन गर्दै आए पनि अखाद्य पदार्थको नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई ‘अन दी स्पट’ कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । हरेक व्यापारीले उपभोक्ताको हितमा काम गर्न र सरकारले तोकेको २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यमा कुनै पनि सामान बेचबिखन नगर्न प्रशासनले चेतावनी दिएको छ । तर, प्रशासनको यो चेतावनी कमैले मात्र कार्यान्वयन गरेका छन् । अहिले २० प्रतिशतमात्रै नाफा लिने इमानदार व्यवसायी पनि बिरलै भेटिन्छन् । व्यापारीको काम व्यापार गरेर नाफा कमाउनुमात्रै होइन, ग्राहकको सेवा र सन्तुष्टिबारे चासो राख्नु पनि हो । परम्परागतरुपमा व्यापार गर्नेहरु आफ्नो व्यवसायको साखप्रति ध्यान दिएका हुन्छन् । धेरै नाफा होइन, ग्राहकलाई गुणस्तरीय सामान बेच्न लालायित हुन्छन् । तर, पछिल्लो समय व्यापारमा साख होइन, मार्जिन धेरै चाहिएको हुन्छ । ग्राहकको स्वास्थ्यसँग होइन, नाफा कमाउनुसँग सरोकार रहेको हुन्छ । चाडबाडको समयमा पहिलेदेखि बिक्री नभएका, म्याद नाघेका र कमसल सामग्री कटाउने अवसरका रुपमा लिने र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी महँगोमा बेच्ने प्रवृत्ति यथावत् रहेकाले पनि नियमित अनुगमनको खाँचो देखिएको हो ।
अहिले कोरोना महाव्याधिमा कमाइ नभए पनि गह्रुङ्गो मन लिएर नागरिकहरु देशविदेशबाट गाउँघर फर्किने क्रम बढेको छ । यही मौकामा सार्वजनिक यातायातमा पनि मनपरी भाडा असुल्ने हर्कत हुँदै आएको छ । यसवर्ष विगतमा जस्तो लत्ताकपडा तथा विलासिताका सामग्रीको बिक्रीमा कमी आए पनि दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, तरकारी, तेल, घिउ, मरमसला, गेडागुडीजस्ता सामग्री नै बढीजसो बिक्री हुने गरेका छन् । यस समयमा बजारमा गुणस्तरहीन सामान बेच्नेहरु सक्रिय हुन्छन् । खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्ने, कमसल सामग्रीलाई महँगो मूल्यमा बेच्ने र अखाद्य तथा म्याद गुज्रेका सामान बिक्री भइरहेका छन् । खाद्य पदार्थको गुणस्तरका लागि उद्योगहरुमा अनुगमन बढाउने, व्यापारीका स्टोरहरुमा जाँच गर्ने, गुणस्तरहीन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई सिलबन्दी गरी सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने र अनुगमनमा भेटिएका गुणस्तरहीन सामग्री तथा अखाद्य वस्तु तत्कालै नष्ट गर्ने गर्नुपर्छ । व्यापारीलाई उपभोक्ताको हितविपरीतका सामान बिक्री गर्दा, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्दा, अखाद्य सामग्री बेच्दा कारबाहीमा परिन्छ भन्ने डरत्रासको अनुभूति नियमित अनुगमनबाटमात्रै हुनसक्छ । अखाद्य पदार्थको बिक्रीवितरण बन्द गराउन व्यापारीका ‘गोप्य गोदाम’को खोजी गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ ।